मोडलिङ गर्न अब राजधानीमा
अन्नपूर्ण शुक्रवार, माघ २८, २०७३ 6811 पटक पढिएको
नेपाली समाजमा धेरैजसो अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी राम्रो पढेर डाक्टर, इन्जिनियर भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्छन् । तर केही यस्ता अभिभावक पनि छन् जसले छोराछोरीको चाहनालाई आत्मासाथ गर्दै उनीहरुको रुचीको क्षेत्रमै लाग्न प्रोत्साहन दिने गर्छन् । धनकुटा ४ देव्रेवास निवासी वरुणा राई यस्तै एक भाग्यमानी युवती हुन जसलाई आफुले चाहेको क्षेत्रबाट अघि बढ्न अभिभावकले हौसला दिए ।
जसका कारण धनकुटाकी बरुणा गत वर्ष राजधानीमा आयोजना गरिएको मिस मंगोल नेपाल २०१६ सहभागी भई फस्ट रनरअप हुन सफल भइन । उनी प्रेमवहादुर दलाहाङ राई र आमा विष्णुदेवी राईकी साइली छोरी हुन । धनकुटामा फेसन मोडलिङसम्बन्धी कार्यक्रम हुँदैन । तापनि उनको रुची मोडलिङमै छ । यही विषयमा २३ वर्षिया वरुणाले हरिबहादुर लम्जेलसँग आफ्नो अनुभव सुनाएकी छन् ।
फेसवुकका कारण सफलता
मिस मंगोल नेपालको फेसवुक पेज वरुणाले फलो गरेकी थिइन् । सो पेजबाट नयाँ प्रतियोगीता सुरु भएको थाहा पाएपछि अनलाइन आवेदन दिइन् । धरानमा पूर्वाञ्चलको अडिसन भयो । नी सहित ८ जना छनोट भए । त्यसपछि नयाँ सपना बोकेर क्लोज क्याम्पका लागि काठमाडौं गइन् । लगभग एक महिना लामो प्रशिक्षणमा आत्माविश्वासमा अभिवृद्धि, लुकेको प्रतिभा पहिचानदेखी स्टेजमा वोल्ने, मासको फेस गर्ने, प्रश्नोतरका तरिकालगायत धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाइन् । फेसवुकमा मिस मंगोलको पेज लाइक गरेकाले प्रतियोगीताका बारेमा थाहा पाउनुका साथै धनकुटाबाट काठमाडौंसम्मको यात्रा तय गरी फस्ट रनरअप हुन सफल भएको उनको भनाई छ ।
पढाईमा सधैं अब्बल
वरुणाले यसैवर्ष तुल्सी मेहर क्याम्पस, धनकुटावाट बीबीएस पुरा गरेकी छन् । अब स्नातकोत्तरका लागि काठमाडौं जाने तयारीमा रहेको उनी बताउँछिन । सानैदेखि पढाईमा अब्बल वरुणा कक्षामा सधै प्रथम हुन्छिन् । धनकुटा बजारमा रहेको गोकुण्डेश्वर माध्यमिक विद्यालयवाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तिर्ण गरेकी उनले सोही विद्यालयबाट प्लस टु पुरा गरेकी हुन् ।
सामाजिक कार्यमा रुची
वाल्यकालदेखि नै सामाजिक कार्यमा रुची राख्ने गरेकी उनी त्यसका लागि उपुक्त अवसरको पर्खाइमा छिन् । मिस मंगोल २०१६ मा फस्ट रनरअप हुँदा पाएको पुरस्कार पनि उनले विराटनगरस्थित एक वालगृहलाई प्रदान गरिन् । यो सहयोग जिल्लामै गर्न चाहन्थिन तर संयोगले विराटनगरमा दिनु परेको उनको भनाई छ । आगामी दिनमा जिल्लाको लागि केही गर्ने सोच उनको छ । जसको लागि धनकुटामा गठन भएको यूवाहरुको समूह स्टेपमा टिममा आवद्ध भएकी छिन् । विभिन्न कार्यक्रमहरु गरि संकलन भएको रकमलाई वालवालिका र महिलाको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने उनले बताइन् ।
मिस मंगोलको फस्ट रनरअप भएपछि आफूमा केही जिम्मेवारी वोझ भएको उनले बताइन् । उनी भन्छिन् ‘पहिला जे गरेर हिड्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ । तर अहिले म मिस मंगोलमा सहभागिता भएको मान्छे । मनपरी हिड्न पाइन्दैन जस्तो लाग्छ ' मिस मंगोलको एक महिने क्लोज क्याम्प रहँदा धेरै कुरा सिक्न पाएको कुरा उनले व्यक्त गरिन् । सूरुमा आफूमा कन्फिडेन्स पाइन् । ‘पहिला मनभित्र धेरै कुरा गर्न सक्छु भन्ने रहर जाग्थ्यो । तर वाहिर वोल्न सक्दिा थिए ।' उनले भनिन् ‘यहाँ आएर वौद्धिक क्षमताका विकास भयो । अव कसैसँग वोल्नु पर्दा । धेरै मान्छे अगाडी वोल्दा डर लाग्दैन । खुलेर कुरा गर्न सक्छु ।' अब हरेक विषयमा वोल्नु पर्दा जानेसम्मको कुरा नडराइ वोल्न सक्ने उनले बताइन् ।
मोडलिङ गर्ने चाहना
वरुणाको पढाई सँगै भविष्यमा मोडलिङ गर्ने चाहना छ । सोही चाहनाले गर्दा उनी मास्टर्स पढ्न काठमाडौं जाँदैछिन् । तर मिस मंगोल २०१६ मा फस्ट रनअप भइसकेपछि उनलाई भिडियो गितमा मोडलिङ गर्न धेरैले प्रस्ताव राखे । अहिले नै मोडलिङ गर्ने तर्फ आफूले नसोचेको भन्दै आफू पन्छिएको उनले बताइन् । राम्रो गीतमा मोडलिङ गर्ने अफर आएको खण्डमा आफूले स्वीकार गर्ने उनले बताइन् । त्यस्तै सामाजिक क्षेत्रको कार्यमा संलग्न हुने उनको योजना छ ।
जित्ने आशा थियो
धरान अडिसनमा छनौट हुँदा देखि नै उपाधी जित्छु भन्ने कन्फिडेन्स उनमा थियो । ‘फर्कन्दा धनकुटाको नाम राख्नु नै भनेर गएकी थिएँ' उनले भनिन् ‘सकभर जितेरै आउने लक्ष्य थियो । उपाधी जित्न नपाउँदा मनमा कस्ता कस्तो लाग्यो । तर फस्ट रनरअप भएर पनि धनकुटाको नाम राख्न पाउँदा खुसी लाग्यो ।'
परिवार र साथीभाईको सर्पोट ले नै आफू मिस मंगोल २०१६ को फस्ट रनरअप घोषित् भएको उनले बताइन् । उनलाई सार्थीहरुले तिमीले उपाधी जित्छौं भन्ने हौसला दिने गरेका थिए ।
फुर्सद हुने वित्तिकै उनी पढ्ने गर्छिन् । घरमा वस्दा प्राय उनको हातमा किताव हुने गर्छ । त्यस्तै साथीहरुसँग नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्न उनलाई औधी मन पर्छ ।
बिहीबार, कात्तिक २, २०७४ तेस्रोलिंगीलाई चाडबाडमा झन् अप्ठ्यारो
बिहीबार, कात्तिक २, २०७४ रमाइलो यमपञ्चक
शुक्रवार, असोज २७, २०७४ करिनाको डाइटिङ सूत्र
शुक्रवार, असोज २७, २०७४ कसको तिहार कस्तो ?
शुक्रवार, असोज २७, २०७४ सेलेनासँग विवाह गर्ने सोचमा विकेन्ड
शुक्रवार, असोज २७, २०७४ छक्कापञ्जा- ३ को तयारी
शुक्रवार, असोज २७, २०७४ सलमानसँग फिल्म खेल्न मानेनन् अमिताभ
शुक्रवार, असोज २०, २०७४ मेरी कोमपछि पिटी उषा बन्दै प्रियंका
यी हुन् लक्ष्मीका उपासक 12174
राम राज्यको प्रतीक तिहार 2116
घरघरमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिँदै 5914
मनमा पनि बलोस् दियो ! 2739
दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज अन्‍योलमा 6168
को बन्ला मुख्यसचिव ? 13457
सी जिनपिङका पाँच वर्ष: व्‍यक्तिगत अधिकार बढ्‍यो, देशको लागि खतरा 24103
यसरी छानौं तिहारमा शुद्ध खानेकुरा 2390
यस्तो हुनुपर्छ प्रदेशको राजधानी 3927
मधेसमा भाइटीकाको रौनक (फोटोफिचर) 5206
शुभसाइतमा राष्ट्रपतिबाट भाइ डेगेन्द्र पाण्डेलाई टीका प्रदान 7510
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले साइत भन्दा एक घण्टा अगाडि नै टीका लगाए 17930
प्रधानमन्त्री देउवाले उत्तम साइतमै टीका लगाए 3690
भाइटीकाको उत्तम साइत ११:५१ बजे 2773
सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको ज्‍यान गयो 1177
टेलिकमले कात्तिकभर नि:शुल्‍क यूसिम बाड्‍ने 29634
प्रविधि पत्रकार मञ्‍चको अध्‍यक्षमा रेग्मी सर्वसम्‍मत 1012
अब ट्‍वीटरमा दुई सय ८० शब्द लेख्‍न सकिने 1326
सगुनमा दोस्रो चरणको लगानी नोभेम्वर ३० सम्म 1311
पीओएस मेसिनको प्रयोग बढ्यो 5650